Bylaws uye Bumbiro - Wepasi Pose Kunyorera Nzvimbo Association
Mitemo yeMubatanidzwa inowanikwa nekudzvanya pa Yepasi Pose Kunyorera Nzvimbo Sangano Mitemo.
The Associations Constitution inowanikwa nekudzvanya pa International Writing Centers Association Bumbiro.
Chinyorwa I: Zita uye Chinangwa
Chikamu 1: Zita resangano richava International Writing Centers Association, rinotevera kunzi IWCA.
Chikamu 2: Segungano reNational Council of Teachers yeChirungu (NCTE), iyo IWCA inotsigira uye inosimudzira kudzidza uye kusimudzira kwehunyanzvi kwenzvimbo dzekunyora nenzira dzinotevera: 1) inotsigira zviitiko nemisangano; 2) kumberi kudzidza uye kutsvagisa; 3) kusimudzira iyo nyanzvi mamiriro enzvimbo dzekunyora.
Chikamu 1: Nhengo yakavhurika kune chero munhu anobhadhara mari.
Chikamu chechipiri: Dhizaini dhizaini ichaiswa muMitemo.
Chisungo chechitatu: Utongi: Mahofisi
Chikamu 1: Mahofisi anozove Mutungamiri wePashure, Mutungamiri, Mutevedzeri weMutungamiriri (anova Mutungamiriri uye Wakave Mutungamiri mumakore matanhatu akateedzana), Treasurer, uye Secretary.
Chikamu chechipiri: Mahofisi achasarudzwa sezvakataurwa muChinyorwa VIII.
Chikamu chechitatu: Mitemo yehofisi ichatanga nekukurumidza mushure meNCTE Koniferensi Yegore Inotevera sarudzo, kunze kwekunge nguva yacho yazadza chinzvimbo (ona Chinyorwa VIII).
Chikamu chechina: Mitemo yehofisi yeMutevedzeri weMutungamiriri-Mutungamiriri-akateedzana Mutungamiri ichave makore maviri muhofisi yega yega, isingadzoreke.
Chikamu chechipiri: Mitemo yehofisi yeMunyori neMubati wehomwe ichave makore maviri, anogona kudzoreredzwa.
Chikamu chechitanhatu: Mahofisi anofanirwa kuchengetedza nhengo dzeIWCA neNCTE panguva yekushanda.
Chikamu 7: Iwo mabasa evose Mahofisi ndeavo akanyorwa muMitemo.
Chikamu 8: Anosarudzwa Officer anogona kubviswa pachinzvimbo nechikonzero chakakwana pakukurudzira pamwe chete kwevamwe maOfficial uye maviri-matatu matatu vhoti yeBhodi.
Chisungo IV: Utongi: Bhodhi
Chikamu chekutanga: Bhodhi ichaisa inishuwarenzi yakamiririrwa kumamiririri enhengo nekusanganisira Dunhu, Zvakakura, uye Vamiriri veMatunhu Akakosha. Vamiriri vematunhu vanogadzwa (ona Chikamu 1); KuVakuru uye Vakasarudzika Vamiriri vanosarudzwa sezvakatsanangurwa muMitemo.
Chikamu chechipiri: Mitemo yenhengo yeBhodi yakasarudzwa ichave makore maviri, inogona kudzoreredzwa. Mitemo ichadzadziswa; kumisikidza kudzedzereka, kureba kwetemu kunogona kugadziriswa kwenguva pfupi sezvakatsanangurwa muMitemo.
Chikamu chechitatu: Vakabatana vematunhu vane mvumo yekugadza kana kusarudza kuBhodi mumiriri mumwe kubva kumatunhu avo.
Chikamu chechina: Mutungamiriri achagadza nhengo dzisiri-dzinovhota kubva kumasangano anowirirana sezvakataurwa muMitemo.
Chikamu chechipiri: Nhengo dzeBhodi dzinofanira kuchengetedza nhengo yeIWCA panguva yekushanda.
Chikamu chechitanhatu: Mabasa enhengo dzese dzeBhodi, akasarudzwa kana akasarudzwa, akanyorwa muMitemo.
Chikamu che7: Nhengo yakasarudzwa kana yakamisikidzwa yeBhodi inogona kubviswa pachinzvimbo nechikonzero chakaringana pakurudziro yemubvumirano yeVatariri uye vhoti yevatatu kubva muzvitatu.
Chinyorwa V: Utongi: Makomiti uye Mapoka Anoshanda
Chikamu 1: Makomiti akamira anozopihwa mazita muMitemo.
Chikamu chechipiri: Subcommittee, task task, uye mamwe mapoka anoshanda anozopihwa basa neMutungamiriri, akagadzwa uye akamhan'arwa nemaHofisi.
Chinyorwa VI: Misangano uye Zviitiko
Chikamu 1: Pasi pehutungamiriri hweKomisheni Komiti, iyo IWCA ichagara ichitsigira zviitiko zvehunyanzvi zvebudiriro sezvakatsanangurwa muMitemo.
Chikamu chechipiri: Zviitiko zvinoitirwa zvichasimbiswa neBhodi uye zvichasarudzwa zvinoenderana nematanho akatsanangurwa muMitemo. hukama huripo pakati pevagari neIWCA huchave hwakadzama muMitemo.
Chikamu 3: Iyo General Musangano wenhengo ichaitika kuIWCA Misangano. Mukana sezvinobvira, iyo IWCA ichaitawo misangano yakavhurika kuCCCC uye NCTE. Mimwe misangano yakajairwa inogona kuitirwa pakuona kweBhodi.
Chikamu chechina: Bhodhi rinosangana mwedzi miviri kana zvichibvira asi pasingasviki kaviri pagore; quoramu inotsanangurwa sehuwandu hwenhengo dzeBhodi, kusanganisira vanosvika vatatu maGosa.
Chisungo VII: Kuvhota
Chikamu 1: Nhengo dzese dzine mvumo yekuvhotera Mahofisi, nhengo dzeBhodi dzakasarudzwa, uye nekugadziriswa kwebumbiro. Kunze kwekunge zvataurwa chaizvo kumwe kunhu muBumbiro kana maBylaws, ruzhinji rwemavhoti epamutemo rwuchadikanwa kuti chiitwe.
Chikamu chechipiri: Maitiro ekuvhota anozotsanangurwa muMitemo.
Chinyorwa VIII: Kusarudzwa, Sarudzo, uye Nzvimbo
Chikamu 1: Munyori achadaidza mazita; vavhoterwa vanogona kuzvidoma ivo pachavo, kana chero nhengo ingasarudza imwe nhengo inobvuma kusarudzwa. Kuedza kuchaitwa kuverengera vavhoti vanogona kusarudza kubva kunenge vatatu vavhoterwa chero chinzvimbo.
Chikamu 2: Kuti vakwanise, vanokwikwidza vanofanirwa kuve nhengo dzeIWCA dzakamira zvakanaka.
Chikamu chechitatu: Nguva yesarudzo ichadomwa muMitemo.
Chikamu chechina: Kana hofisi yeMutungamiriri ikava isina munhu nguva isati yasvika, Mutungamiri Akapfuura anozadza chinzvimbo ichi kusvikira pasarudzo dzegore rinotevera apo Mutevedzeri weMutungamiri mutsva anogona kusarudzwa. Pakushandurwa kwegore kwevatariri, Vachigaro Vachigaro vachatora Hofisi yeMutungamiri, uye Mutungamiri Akapfuura achapedzisa Hutungamiri hwekare kana hofisi ichave isina munhu (ona Chikamu 4).
Chikamu chechishanu: Kana chero imwe nzvimbo yeOfisi ikava isina munhu nguva isati yasvika, maOfficial maofficial achaita musangano wenguva pfupi unoshanda kusvika pasarudzo dzinotevera dzegore.
Chikamu chechitanhatu: Kana zvinzvimbo zvevamiriri vematunhu zvikave zvisina munhu nguva isati yasvika, mutungamiri wenzvimbo yakabatana anozokumbirwa kugadza mumiriri mutsva.
Chinyorwa IX: Inobatanidzwa Dunhu Rekunyora Nzvimbo Masangano
Chikamu 1: Iyo IWCA inoona sevabatanidzani vacho matunhu ekunyora nzvimbo masangano akanyorwa muMitemo.
Chikamu chechipiri: Vanobatana vanogona kurega chinzvimbo chehukama chero nguva.
Chikamu chechitatu: Matunhu matsva anonyorera chinzvimbo chekubatana anotenderwa nevhoti yakawanda yeBhodi; maitiro ekushandisa uye zvirevo zvinotsanangurwa muMitemo.
Chikamu chechina: Vese vanobatana mumatunhu vane kodzero yekugadza kana kusarudza kuBhodi mumiriri mumwe kubva kumatunhu avo.
Chikamu 5: Matunhu akamira zvakanaka anoratidza kudiwa anogona kunyorera IWCA yezvipo kana kumwe kutsigirwa kwezviitiko zvemudunhu sezvakataurwa muMitemo.
Chinyorwa X: Mabhuku
Chikamu 1: Chinyorwa Chekunyora Chinyorwa ndiko kuburitswa zviri pamutemo kweIWCA; boka revapepeti rinosarudzwa uye rinoshanda neBhodi zvinoenderana nemaitiro akanyorwa muMitemo.
Chikamu 2: The Kunyora Lab Yetsamba ibhuku rakabatana reIWCA; boka revapepeti rinoshanda neBhodi zvinoenderana nemaitiro akanyorwa muMitemo.
Chinyorwa XI: Mari uye Hukama Hwezvemari
Chikamu 1: Mahomwe makuru emari anosanganisira nhengo dzemari uye mari kubva kuIWCA-inotsigirwa zviitiko sezvakatsanangurwa muMitemo.
Chikamu chechipiri: Maofficial ese anotenderwa kusaina makondirakiti emari uye kudzorera mari pachinzvimbo chesangano zvinoenderana nemitemo yakatarwa neMitemo.
Chikamu chechitatu: Mari dzese nemashandisirwo achaverengerwa nekushumwa neMubati weHomwe mukuteerera zvese IRS zvirevo zvine chekuita neasina purofiti.
Chikamu chechina: Kana sangano rikaputsika, maofficial anotarisira kugoverwa kwemidziyo zvichiteerana nemirau ye IRS (ona Chinyorwa XIII, Chikamu che4).
Chinyorwa XII: Bumbiro neMitemo
Chikamu 1: IWCA ichatora nekuchengetedza Bumbiro rinotsanangura zviga zvesangano uye seti yeMitemo inotsanangura maitiro ekuitwa.
Chikamu chechipiri: Kugadziridzwa kweMutemo kana maBylaam anogona kukurudzirwa na2) Bhodhi; 1) nezvikamu zviviri kubva muzvitatu vhoti yenhengo dzinopinda musangano weIWCA Mukuru; kana 2) nezvikumbiro zvakasainwa nenhengo makumi maviri ndokuendeswa kuMutungamiriri.
Chikamu chechitatu: Shanduko kuMutemo wenyika dzinoitwa pazvikamu zviviri kubva muzvitatu zvemavhoti epamutemo akaunzwa nenhengo.
Chikamu chechina: Kugamuchirwa uye shanduko kuMitemo inoitwa pazvikamu zviviri kubva muzvitatu vhoti yeBhodi.
Chikamu chechipiri: Maitiro ekuvhota anotsanangurwa muChinyorwa VII.
Chinyorwa XIII: IRS Mitemo Yekuchengetedza Mutero Unoregererwa Mamiriro
IWCA nevanobatana navo vanoteerera zvinodiwa kuti vasabhadharwe seSangano rinotsanangurwa muchikamu 501 (c) (3) cheInternal Revenue Code:
Chikamu 1: Sangano rakarongeka rakarongedzerwa chete nechipo, zvechitendero, zvedzidzo, kana zvesaenzi, kusanganisira, nekuda kwezvinangwa zvakadaro, kugoverwa kumasangano anokodzera pasi pechikamu 501 (c) (3) yeInternal Revenue Code, kana iyo inoenderana chikamu chechero ramangwana remutero kodhi.
Chikamu chechipiri: Hapana chikamu chemubhadharo wesangano chinotanga kubatsira, kana kugoverwa kunhengo dzayo, matirastii, maofficial, kana vamwe vanhu vakazvimiririra, kunze kwekunge masangano achapihwa mvumo uye kupihwa simba rekubhadhara muripo pamabasa. yakapihwa uye kubhadhara uye kugovera mukufambisa zvinangwa zvakatemwa muchikamu chekutanga pano uye muchinyorwa __2__ chebumbiro iri.
Chikamu chechitatu: Hapana chikamu chakakura chezviitiko zvesangano chinenge chiri chekufambisa, kana kuyedza kukurudzira mutemo, uye sangano haritore chikamu, kana kupindira (kusanganisira kutsikisa kana kuendesa zvirevo) chero mushandirapamwe wezvematongerwo enyika. pachinzvimbo kana kupesana nechero munhu anokwikwidza kuhofisi yeruzhinji.
Chikamu 4: Kunyangwe paine chero kupihwa kwezvinyorwa izvi, sangano harizoitisa chero zvimwe zviitiko zvisingatenderwe kuitiswa (a) nesangano rinobvisirwa mutero wemubatanidzwa pasi pechikamu 501 (c) (3) cheMukati meMitero Code, kana chikamu chinoenderana chechero ramangwana remutero kodhi, kana (b) nesangano, mipiro iyo inobviswa pasi pechikamu 170 (c) (2) yeInternal Revenue Code, kana chikamu chinoenderana chechero ramangwana mutero wemubatanidzwa. kodhi.
Chikamu chechipiri: Pakaputsika kwesangano, zvinhu zvinogoverwa kune imwechete kana zvinangwa zvekuregererwa mukati mezvinoreva chikamu 5 (c) (501) cheInternal Revenue Code, kana chikamu chinoenderana chechero ramangwana remutero remubatanidzwa, kana ichagoverwa kuhurumende yemubatanidzwa, kana kune nyika kana hurumende yemunharaunda, kuitira chinangwa cheveruzhinji. Chero izvo zvinhu zvisina kuraswa zvakadaro zvinofanirwa kuraswa neDare reCompetent Jurisdiction yedunhu mune hofisi huru yesangano panguva iyoyo, chete nekuda kwezvakadaro kana kune rakadai sangano kana masangano, sekutaurwa kwachaitwa neDare, zvakarongeka uye zvinoshandiswa chete nekuda kwezvinangwa zvakadaro.